Paikady SEO ve ny media sosialy? | Martech Zone
Tsy fahita matetika raha miresaka sy mizara tetika amin'ny fampiharana ny varotra haino aman-jery sosialy ho tetikady SEO. Mazava ho azy, ny ankamaroan'ny fifamoivoizana amin'ny tranonkala izay nanomboka tamin'ny motera fikarohana dia voatosiky ny fizarana ara-tsosialy ankehitriny, ary ho an'ireo mpivarotra miditra, ity loharanom-pifamoivoizana goavambe ity dia tsy azo odian-tsy hita.
Saingy seza an-tsaina ny fisarihana ny marketing amin'ny media sosialy ao ambanin'ny elo amin'ny paikady SEO. Ekena, misy zavatra azonao atao mandritra ny fanentanana ny fampielezana haino aman-jery sosialy izay hisy fiatraikany tsara amin'ny SEO (bitsika misy marika ohatra) fa ny marketing amin'ny haino aman-jery sosialy dia mihoatra lavitra noho ny fampiakarana ny fahitana amin'ny valin'ny motera fikarohana.
Raha manao ny marina (ary milalao mpisolo vava ny devolako) dia misy tombony lehibe tokoa ny fampidirana ny anaranao ho lasa isa na tambajotra sosialy betsaka araka izay azo atao satria mety rehefa misy mitady vokatra na serivisy dia manondro ny asanao amin'ireto. tranokala be fifamoivoizana dia afaka mandondona mpifaninana amin'ny pejy voalohany. Rehefa mitranga dia fandresena izany.
Fa mandresy na tsia, dia lalao diso. Rehefa mampifandray olona amin'ny marketing media sosialy ianao dia efa ao amin'ny fantsom-pandrenesanao izy ireo. Ny tanjona dia tsy fanentanana amin'izao fotoana izao. Ny fikarohana dia tombony maharitra amin'ny rambony amin'ny fandraisana anjara, fa tsy ny antony hanaovana azy. Rehefa miditra amin'ny haino aman-jery sosialy ianao dia efa manangana fahatokisana, mianatra momba ny zavatra ilain'ny mpanjifanao sy ny zavatra mahaliana azy ary ny fametrahana toerana anao. Raha mifantoka amin'ny tombony SEO ianao dia mijery baolina diso.
Ny SEO sy ny marketing amin'ny haino aman-jery sosialy dia samy asa tena ilaina mba hahombiazana amin'ny Internet ary miasa miaraka izy ireo, toy ny fanambadiana. Tsy tafiditra ao amin'ny valahany izy ireo. (sanganasa nomena an'i Lee Odden)
Niova ve ny haino aman-jery sosialy Biz kely?
May 17, 2011 ao amin'ny 3: 32 PM
Miankina amin'ny famaritanao ny SEO daholo izany.
raha toa ny tianao holazaina amin'ny fanatsarana ny tranokalanao ho an'ny kwds sasany dia tsy ho fanampiana be loatra ny SM raha toa ny tianao holazaina amin'ny fanatsarana ny fananana tranokala izay mifandray amin'ny orinasanao.
May 17, 2011 ao amin'ny 5: 41 PM
Heveriko fa ny fahasamihafana misy eo amin'ny pejy sy ny pejy ivelan'ny pejy fanamafisana dia manondro ianao. Na izany na tsy izany dia mbola SEO ihany io fa tsy marketing media sosialy. Ny hetsika ara-tsosialy rehetra mitranga eo amin'ny toerana sy voatanisa dia hanampy ny fanatsarana anao eo an-toerana, toy ny hetsika ara-tsosialy rehetra mitranga any ivelan'ny tranokala ary voatanisa dia hanampy ny fanatsarana anao ivelan'ny tranokala. Ny teboka manan-danja dia ny mazava amin'ny anjaranao –mba mitondra fahatsiarovan-tena ve ianao sa fifamofoana mahafinaritra?
May 18, 2011 amin'ny 4: 33 AM
Misaotra, Lee. Ny tatitra eMarketer dia azo antoka fa maneho ny zavatra niainako manokana amin'ny maha mpanjifa entana mafy ahy. Azoko antoka fa samy hafa be ny valiny rehefa mijery tsena toy ny trano fisakafoanana aho, izay misy fandraisana anjaran-tserasera / finday lehibe amin'ny fitaomana ny mpanjifa.
May 19, 2011 amin'ny 8: 15 AM
eny ny media sosialy dia paikady seo… manome fampahalalana bebe kokoa amin'ny fizarana lahatsoratra, lahatsoratra eo amin'ny namana..izay manampy amin'ny fampitomboana ny fifamoivoizana.. fampiasana ny haino aman-jery sosialy amin'ny fampandrosoana rohy dia dingana mahasoa sy vao misondrotra ..
May 19, 2011 ao amin'ny 3: 41 PM
Alok, azo antoka fa manaporofo ny hevitrao ianao amin'ny famoahana rohy mankany amin'ny orinasa SEO amin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitra ara-tsosialy. Mipetraka ny fanontaniana… mampiditra ahy amin'ny resaka ve ianao, sa mampiasa sehatra media sosialy tsotra fotsiny hamoronana fahatsiarovan-tena? Ary ve izany rohy miverina izany dia sarobidy kokoa noho ny fahafaha-manao resaka amiko izay mametraka fifandraisana sy mampiorina ny fifampatokisana? Moa ve ny fizarana rohy miverina dia mametraka anao ho olona iray izay liana tsotra izao amin'ny sanda SEO amin'ny sehatra sosialy?
Azonao atao koa ny manazava ny hevitro, fa ny haino aman-jery sosialy sy ny SEO dia mitaky fomba maro samy hafa hahomby. Miaraka amin'ny SEO, ny fahombiazana dia manatanteraka ny tanjona. Ny fampiasana haino aman-jery sosialy hanovana ahy ho mpanjifa dia mila mihoatra ny hevitra sy rohy fotsiny. 🙂
May 19, 2011 ao amin'ny 6: 28 PM
Ny mampihomehy dia tsy maintsy nofafako ny fanehoan-kevitr'i Alok satria nanandrana nanipy lozisialy ratsy izy!
May 20, 2011 ao amin'ny 2: 06 PM
Heveriko fa i Alok no nilaza ny hevitro ho ahy. Ho an'ny olona iray mifantoka amin'ny SEO, ny media sosialy dia sehatra iray hafa amin'ny fampiharana ny paikadiny mampifandray. 🙂
24 Okt 2011 amin'ny 1:56 PM
ho ahy dia paikady izany .. fananganana vondrom-piarahamonina sosialy amin'ny fanaovana doka mora foana ny orinasanao. satria ny olona ao amin'ny fiarahamonina sosialy dia mety ho loharanon'ny mpanjifa.